Mujaahid Cabdilaahi Cabdi Muuse oo Hadhi-sharafeed Laysku Arkay ku maamusay Duuliye Axmed Dheere | Salaan Media
Mujaahid Cabdilaahi Cabdi Muuse oo Hadhi-sharafeed Laysku Arkay ku maamusay Duuliye Axmed Dheere
December 5, 2020 | Published by: Hamse
Hargeysa (Salaan Media)- Mujaahid Cabdilaahi Cabdi Muuse (Bakayle) oo ka mid ah halgamayaashii SNM ee naftooda u huray dib-u-xoreynta Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa hadhimo sharafeed laysku arkay ku maamuusay duuliye sare Axmed Dheere oo ka dhiidhiyey duqeyntii iyo Xasuuqii ay dowladdii Siyaad Barre ku samaysay Shacabka Somaliland.
Munaasibadda hadhimo-sharafeedka ah oo si heer-sare ah loo agaasimay, ayaa ku qabsoontay Hotel Maansoor ee magaalada Hargeysa, waxaana ka qayb-galay qaar ka mid ah Mujaahidiintii SNM, Aqoonyahan, Wax-garad iyo Marti-sharaf kale.
Waxa ugu horeyn munaasibadda ka hadlay qaar ka mid ah halgameyaashii SNM oo ku dheeraaday taariikhda baalka dahabka leh ee uu sameeyey duuliye Axmed-dheere iyo Abaalka uu gashaday shacabka Somaliland, gaar ahaan kuwa magaalada Hargeysa kaddib markii uu diiday inuu duqeeyo shacabka isagoo xilligaas ka mid ah duuliyeyaashii diyaaradihii dagaalka ee ka soo kacayey garoonka diyaaradaha ee Hargeysa, haddana duqeynayey isla caasimadda Hargeysa.
“Waxaan marka hore u mahad-naqayaa mujaahid Cabdilaahi Cabdi Muuse oo xafladdan Qado-sharaf ah ee maamuuska leh ee uu halkan isugu keen yeedhay isagoo ku sharfaya duuliye sare Axmed Dheere,” sidaas waxa yidhi mid ka mid ah marti-sharaftii ka qayb-gashay munaasibadda.
“Wax-qabad fiican buu sameeyey oo xabbadii loo soo buuxiyey ayuu ka badbaadiyey ummad dhan oo uu halaagi lahaa, isagoo u tudhay aayihiisa iyo aakhiradiisa,” sidaasna waxa ku markhaati furay Dr Aw-Koombe halkaas ka sheegay inay Isku-ciidan ahaayeen oo Aag kawada dagaalameen Mujaahid Cabdilaahi Cabdi Muuse oo hadhimo-sharafeedka bixiyey.
Mujaahid Cismaan Awr-Liqe oo isaguna halkaas ka hadlay, ayaa yidhi, “Waxaynu isugu nimi casuumaddan inaynu ku soo dhawayno duuliyihii 1988-kii dagaaladii halkan ka socday bulshada reer Somaliland ninkii u hiiliyey isagoo fulinaya waajibka islaamnimada, waddaniyadda iyo masuuliyadiisa shaqsiga ah ku diiday amarkii la soo siiyey inuu ku xasuuqo dadka diyaaraddii dagaalka ee uu waday oo dadkan cashuurtoodii laga soo iibiyey, isaguna uu wax ku bartay cashuurtaas”.
Mujaahid Ibraahim Dhegaweyne oo isaguna munaasibadda ka hadlay, ayaa ku dheeraaday taariikhda qiimaha leh ee Duuliye Axmed Dheere ku leeyahay Somaliland iyo abaalka uu gashaday shacabkeeda.
Mujaahid Cabdilaahi Cabdi Muuse (Bakayle) oo fidiyey hadhimo-sharafeedka kulmiyey qaar ka mid ah haldoorka ka sii nool mujaahidiintii SNM ee lagu maamuusay Duuliye Cabdilaahi Dheere, ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada munaasibadda loo qabtay.
“Ujeeddadu waxa weeyi inaanu Axmed u mahad celinno, oo aanu uga mahad-celinno wixii uu dadkiisa u qabtay oo ahayd tii ugu wanaagsanayd oo ahayd inuu dadkii ka badbaadiyey diyaaradii lagu yidhi dadka ku soo xasuuq, geesinimadaa uu sameeyey waa mid ilaa maanta u qoran,” Sidaas ayuu yidhi Mujaahid Cabdilaahi Cabdi Muuse.
Mujaahidka oo la hadlayey Duuliye Axmed-Dheere, waxa uu mid mid ugu sheegay mujaahidiinta ma qayb-galay xafladda lagu maamuusay, kuwaaas oo uu sheegay inay isugu jiraan xubno ka mid ah halgamayaashii ibo-furay halgankii SNM la gashay nidaamkii Siyaad Barre ee UFFO, Dhakhaatiirtii Dhayi jirtay dhaawacyada Mujaahidiinta iyo Aqoonyahankiii qoriga u qaatay inay shacabka iyo dalka ka xoreeyaan nidaamkii kaligii taliska ah ee Siyaad Barre oo Mujaahid Cabdilaahi Cabdi Muuse ka mid yahay.
“Anigu waxaan ka mid ahaa aqoonyahankaas iyagoon waxba ka garaynin qoriga qaatay ee dagaalaamay. Markaa Nimankaas oo dhan baa maanta halkan qadada kuugu sameeyey, si ay kuu yidhaahdaan aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay wax-qabadkaagii,” sidaas ayuu yidhi Mujaahid Cabdilaahi Cabdi Muuse (Bakayle).
Gebo-gabadii Munaasibadda waxa halkaas ka hadlay Duuliye sare Axmed-Dheere oo mujaahidiinta uga mahad-celiyey hadhimo-sharafeedka lagu maamuusay, isagoo ka mahad-sheegtay sida bulshada kala duwan ee Somaliland u qiimeeyeen muddadii uu dalka Joogay.
“Aad iyo aad baan idinka mahad-celinayaa kulankan aanu isugu nimi walaaladay iyo qado-sharafta uu noo sameeyey walaalkeyga Cabdilaahi. Waxa xusid mudan inaan halkan joogay muddo laba bilood ku siman, intaasna waxa lay samaynayey marti-qaadyo iyo soo-dhawayn sharaf badan aan kala kulmay.” Sidaas ayuu yidhi Duulliye Axmed Dheere oo halkaas ka sheegay in marka laga yimaaddo kala duwanaanshiyaha siyaasadda iyo dowladnimada ay shacabka Somaliland yihiin kuwo jecel Soomaalinimada.